Aqoonkaab mahadhaddii Aristotle | Aqoonkaab
Aug 19, 2016Arrimaha bulshada
Aristotle;waxa uu ahaa faylasoof u dhashay waddanka giriigga oo dunida wax badan ku soo kordhayay,waxa uu ka mid yahay dad fara kutiriska ah ee aqoonta iyo ilbaxnimada salka u dhigay,qoraalo badan ayaa laga sameeyay nolosha faylosoofkan u dhashay waddanka giriigga haddii ay tahay baadhitaannadu sameeyay iyo afkaartiisi iyado lagu eray-tebiyay (tarjumay) afaf badan oo dunida lagaga hadlo si ay u akhristaan nolosha iyo dedaalka uu sameeyay Aristotle.
Afaf badan ayaa lagu qoray soyaalka Aristotle waayo eray-tebintu ama tarjumaddu waa habka loo waadigi karo ama laysugu gudbinkaro aqoonta iyo ilbaxnimada,taas darteed, aniga oo ka duulaya ,waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago qoraal kooban oo aan ka diyaariyay taarikhda Aristotle maadaama ay kooban tahay qoraaladda laga qoray Aristotle ee afka soomaliga lagu eray-tebiyay (tarjumay) si ay u akhriyaan dadka akhrisan kara afka soomaliga oo keliya.
Maxaa laga faaidaya in af-soomali lagu qoro taarikhda Aristotle oo aynaan dhaqan iyo diintoona waadigin?
Maadaama uu Aristotle aqoonta iyo cilmiga wax badan ku soo kordhiyay waa muhiimin in jilaasha soo kacaya ay wax ka ogaadaan si ay saamayn tani ugu yeelato ,aqoonta iyo cilmigana ay awoodda badan geliyaan.
Eray-tebintu waa mid ka mid ah habab laysugu gudbiyo aqoonta iyo ilbaxnimada sida ay sooyaalka iyo taarikhda caalamiga ahi ina barayso.
Aristotle waxa dhashay 384 BC. Waxa uu ku dhashay tuulo ku taal dhanka waqooyi ee dalka giriigga oo lagu magacaabo STAGIRA.waxa uu aabihii la shaqayn jiray boqorkii misidooniya ee la odhan jiray AMYNTAS-kii labaad.waxa uu aabbihii ka shaqayn jiray maxakamadda waddankaas hase ahaate,waxa uu geeriyooday isago oo Aristotle caruur ah.hooyadi wax badan lagama oga hase ahaate waxa la sheegaa inay dhimatay isagoo Aristotle yar.markii Aristotle aabbihi geeriyooday waxa masuuliyaddiisa la wareegay ninka guursaday walaashii oo ka waynayd.
17 jir markuu ahaa Aristotle , waxa loo diray magaalada Athen oo ahayd wagaas xarunta aqoonta iyo cilmiga ee adduunka (academic center) si uu waxbarsho sare ugu helo halkaas (higher education) .aristotle; waxa u ka mid noqday ardaydii faylsoofkii PlATO oo madax ka ah maxad weyn oo saamayn ku lahaa nolosha iyo hab fikirka giriigga .PLATO; waxa uu ka mid ahaa ardaydii suqraad (Socrates).
Plato waxa uu dhintay 347 BC isagoo ay ardaygisii Aristotle isku maan-dhaafsan yihiin aragtiyo badan ,Aristotle lama wareegin booskii uu banneeyay Plato sida ay taarikhdu qorto.
Aristole waxa uu boqoolay magaalada Mysia oo uu joogay saaxibkii Hermias,boqorkii Aterneus ee magaalada Mysia,3 sano markii uu joogay halkaas Aristotle,waxa uu guursaday gabadh uu abti ahaa boqorka magaaladu oo lagu magaacabi jiray Pythies ,waxaana u dhalatay inan oo lagu magac daray hooyadeed.
Aristotle waxa uu dib ugu laabtay magalada misidooniya. Taariikhdu markay ahayd 335BC,waxa bilaabay inuu bare u noqdo wiil dhalay boqorkii misodooniya ee Philib-kii labaad oo ahaa13 jir. Wiilkani waxa uu noqday wiil caan ah oo taarikhda dunida gallay,waxa uu ahaa hugaamiye geesi ah,waxa uu galay dagaalo badan iyadoo wali raadkii uu dunida kaga tegay aan tirtirmin ilaa hadda haddana waxa dhintay isago da’a yar. Waa kuma wiilkaasi? Waa alaxanderkii roonaa! (Alexander the Great).
Aristotle waxa uu dugsi ka furtay magalada Athena oo lagu magaacabo LYCEUM,halkaas ayuu bare iyo cilmi-baadhe ka ahaa.
Aristotle isla sannadkaas waxa geeriyootay xaaskiisi.ka dib waxa uu Aristotle jeclaaday gabadh kale oo lagu magacaabi jiray Herpyllis,taariikh-yahannadu waxay qoraan inay addoon u ahayd ,laakiin se uu xoreeyay markii danbe ka dib uu guursaday,waxaynu dhashay caruur uu ka mid yahay wiil uu ugu magacdaray aabbihi oo lagu magacaabi jiray Nicomachean .
Ka dib markii uu dhintay ardaygiisii hore ahaana hugaamiyaha misidooniya,waxa la inqilaabay dawladdi misidooniya , Aristotle waxa uu u baxsaday jisiradaha Euboea halkaas oo ku idlaystay noloshiisi.
Aristotle waxa uu wax badan ka darsay sayniska iyo falsadda,waxa sameeyay buug badan oo gaadhay 200 buug.qoraalladiisi ama buugtiisa waxa ugu caansan ; Nicomachean Ethics and Eudemian.
Marka laga yimaddo qoraaladda Aristotle,waxa uu soo kordhiyay aragtiyo iyo falsafado badan oo wax badan laga tixraacay saamayna ku yeeshay falsadda iyo sayniska.
Aristotle waxa uu geeriyooday 322 BC ka dib xanuun kaga dhacay hab-dhiska dheefshiidka.
Gabagabadii, Aristotle waxa uu ahaa faylasoof u dhashay waddanka giriigga,waxa uu dhashay 384 BC isagoo ku dhashay tuulo lagu lagu magacaabo Stagira,17 jir markuu ahaa waxa ka mid noqday aradaydii Plato.taarikhdu markay ahayd 338 BC waxa uu bare u noqday Alexander-kii roonaa. 335 BC waxa uu furay dugsigiisi halkaas oo u ku qaatay wakhtigiisa intii ugu badnayd barid,cilmi-baadhisiyo qoraal. 322 BC ayuu geeriyooday isago ka baxsaday Athens.
W/D; Dr bashiir Raacdeeye
Previous PostWax badan ka ogow Wadna istaaga Next PostTaariikh nololeedkii Yacquub isxaaq Al-kendi